Laba Haween ah oo maqaarkoodu bixiyo udgoonka cadarka! | Radio Himilo
Home / Haweenka / Laba Haween ah oo maqaarkoodu bixiyo udgoonka cadarka!
Laba Haween ah oo maqaarkoodu bixiyo udgoonka cadarka!
Posted by: Ahmed Haaddi December 18, 2021
Himilo – in kasta oo inteena badan aan isticmaalno cadarka ama waxyaabaha kale ee daryeelka maqaarka, laba dumar ah oo Vietnamese ah ayaa lagu sheegay inuu jirkoodu bixiyo udgoon ubax dabiici ah.
Dang Thi Tuoi, oo ka so jeeda gobolka Sóc Trăng ee Vietnam, ayaa lagu sheegay inay leedahay awood aad u xiiso badan. Marka la xoqo, maqaarkeeda wuxuu soo saaraa udgoonka ubaxa ee lagu tilmaami karo cadar dabiici ah. Dang ayaa la sheegay in ay ogaatay muuqaalka gaarka ah ee jirkeeda dhowr sano ka hor, iyada oo xoqanaysa gacmaha iyo cagaha. Waxay si lama filaan ah hawada uga urisay urtan macaan, waxayna aakhirkii garatay in uu jidhkeeda kasoo baxayo.
“Maalintii, haddii aad rabto inaad uriso udgoonka, waa inaad gacmahaaga is marisaa, laakiin habeenkii, dadka hareerahayga ku sugan weli way urin karaan udugga ka soo baxaya jidhkayga xitaa haddii aan fadhiyo mitir meel iyaga ka fog.” Ms. Tuoi ayaa u sheegtay Doc La Binh Tuong YouTube channel.
Dang Thi Tuoi ayaa ku andacoonaysa in meelaha qaar ee jirkeeda ka mid ah ay ka udgoon badan yihiin kuwa kale, isla markaana ay udgoonka habeenkii ka xoog badan tahay maalintii. Inta lagu jiro wareegga caadada, xoojinta urta ayaa hoos u dhacda ilaa 10 boqolkiiba, laakiin waa tan ugu xoogga badan marka uu jiro dayax .
Sheekada aan caadiga ahayn ee Ms. Tuoi ayaa dareen badan ka heshay baraha bulshada, iyadoo muuqaalkii asalka ahaa ee YouTube uu helay in ka badan 1.7 milyan oo daawasho. Dadka ayaa la yaabay awoodda sare ee gaarka ah ee haweeneyda, kaliya waxaa soo baxday in aysan ahayn mid gaar ah. Ka dib guushii muuqaalkeedii ugu horreeyay, kanaalka Doc La Binh Duong waxaa la xidhiidhay haweenay kale oo sheegtay inay haysato cadar dabiici ah oo iyada u gaar ah.
Ms. Dung, oo ah haweeney ka soo jeeda gobolka Kien Giang, ayaa sheegtay in si la mid ah Dang Thi Tuoi, uu jirkeedu u soo saaro udgoon xooggan, marka la xoqo. In badan ayay garanaysay sifadeeda gaarka ah, waayo mar kasta oo ay gacmaheeda maqaarkeeda ku salaaxdo waxa ay dareemaysay udgoon xooggan, balse weligeed cidna uma sheegin.
Labada haween midkoodna ma awoodin in ay sharaxaan sababta uu jirkoodu u bixiyo udgoonka u eg cadarka.
Previous: Naadi kasta oo Premier League ah miisaaniyadeeda suuqa ee ku saleysan sharciga Financial Fair Play
Next: Maxaa ku dhacay lix ciyaaryahan oo uu Jose Mourinho iibiyay xilli uu ku sugnaa Man Utd